Daah-furka Vivo V2059 oo dhowaan helay Shahaadada Android | BehMaster
Bogga ugu weyn/Android/Daah-furka Vivo V2059 ayaa dhowaan helay shahaadada Android
Daah-furka Vivo V2059 ayaa dhowaan helay shahaadada Android
Telefoonka cusub ee Vivo oo leh nambarka nooca V2059 ayaa lagu arkay GeekBench bishii Abriil 2021. Sida laga soo xigtay warbixinta GeekBench, nooca V2059 wuxuu la bilaaban doonaa Android 11 OS. Qalabka octa-core Chinese Processor Mediatek MT6785 ayaa awood siin doona Vivo V2059. Processor-ka MediaTek MT6785 waxa lagu shubay Vivo V2059, kaas oo noqon kara Mediatek Helio G90 ama Helio G90T oo leh xawli saacad ah 2GHz.
Vivo V2059 waxay heshay shahaadada Android
Maanta waxaan arkay in V2059 ay heshay shahaadada Android oo ay hadda ku taxan tahay liiska rasmiga ah ee aaladaha ay taageerto Android. Si kastaba ha ahaatee, magaca qalabku ma cadda hadda. Waxa laga yaabaa inaan aragno duleel badan iyo warar cusub oo ku saabsan qalabkan maalmaha soo socda. Aad ayaan u hubaa in Vivo ay bilaabi doonto V2059 isla marka uu qalabku helo shahaadada Android.
Xitaa haddii uusan magacu caddayn, waxaan qiyaasayaa inay noqon karto taxanaha soo socda ee Vivo X, taxanaha Y, ama nooca calanka ee S. Waxaa la filayaa in taleefankan casriga ah ee Vivo uu ku soo bixi karo qiimihiisu u dhexeeyay $206 iyo $274. GeekBench, taleefanka casriga ah wuxuu helay dhibco wanaagsan oo ah 452 hal-core iyo 1419 multi-core.
Sida ku cad natiijooyinka GeekBench, waxaan filayaa in Vivo V2059 uu noqon doono talefan ciyaareed taleefannada casriga ah ee dhexdhexaadka ah. Taleefanka ciyaaraha ee kala duwan ee qiimaha u dhexeeya $200 ilaa $275 maaha doorasho xun.
Vivo ayaa ku dhawaaqday daabacaadda shaashadda qalooca ee X60 gudaha Shiinaha
Taxanaha 'Vivo's X60' wuxuu horey u lahaa lix taleefan oo casriga ah, seddex ka mid ahna waa Shiinaha oo gaar ah. Ku dhawaaqid dhowaan ayaa shaaca ka qaaday in Vivo ay qorsheyneyso inay sii deyso daabacaadda qaloocan ee X60, kaas oo noqon doona Shiinaha gaar ah. Daabacaada qaloocan ee Vivo X60 ayaa ka muuqan doonta muraayad 6.56-inji AMOLED ah oo qaloocan oo leh 120Hz cabbir.
Waxaan rajeynayaa inaad ka heshay Vivo V2059 daadintan mid xiiso leh, haddii aad sameyso markaa fadlan ku wadaag warbaahinta bulshada. Sidoo kale, ku sii faallooyin qaybta faallooyinka ee hoose. Waxaan uga jawaabi doonaa su'aalahaaga oo dhan sida ugu dhakhsaha badan. Raac DroidMaze on Twitter si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay iyo wararka ku saabsan Android. Waad ku mahadsan tahay akhrinta
Patent Xiaomi waxay daaha ka qaadaysaa talefan modular ah oo leh moduleka kamarada zoom
Redmi K20 waxay heshay March Android Security Patch
Redmi Note 8 2021 oo si caalami ah u bilaabeysa, ayaa heshay shahaadada SIG ee Bluetooth
Sida Looga Saaro Goobta Tirada ee Bogga Alaabta WooCommerce
Sida loo codsado akoon Twitter oo la xaqiijiyay oo leh calaamad buluug ah